I-BMW kaSteve Jobs iyathengiswa kwifandesi Ngaba unayo imali? | Ndisuka mac
Ukuba ungumthandi wemoto ungabona eli thuba njengelinye lokufumana izandla zakho ukuba yintoni enye yeemoto ze-CEO zikaSteve Jobs. Njengoko sele usazi, ukuba ulandela yonke into ejikeleze ubomi bukaMisebenzi, wayengumntu othe qelele ukuze akwazi ukuthenga imoto yakhe kwifandesi ehlelwe yindlu yefandesi Sotheby's ekuqaleni kukaDisemba ozayo Inokuba kukuthengwa kwamaphupha akho.
Ngokumalunga nembali yesithuthi, sinokukuxelela ukuba ayilusapho lukaJobs oluyibekileyo kwifandesi kwaye yile Inomtsalane iBMW Z8 eguqukayo Kwakungasuki rhoqo eMisebenzini kwaye kukuba wayiqhuba nje iminyaka emithathu.
Ngoku indlu yefandesi Sotheby's Uye wakwazi ukuhlela ifandesi kuba umnini wesithuthi ngoku ufuna ukukhupha kuye amawaka ambalwa eedola. Ekuqaleni, imoto yayiyeyenye CEOze Oraclekubizwa Larry Ellison ekwathi ngonyaka ka-2000 wanikezela ngeMisebenzi eli litye limxelelayo ukuba ngenene yayingummangaliso ohambelana nefilosofi yakhe yobomi.
Imisebenzi yavuma kwaye wayifumana, nangona kwiminyaka kamva wayithengisa komnye umntu owathi wayithengisa kweyesine, nangona ethubeni waziva ukuba wenze impazamo ngokuthengisa kwaye wayifumana kwakhona. Ngoku, ekugqibeleni ibuyela kwifandesi ke le nto imangalisayo Ukudlula ezandleni zikaSteve Jobs kuya kuba nakho ukufunyanwa ngoyena mntu wabiza ixabiso eliphezulu.
Isithuthi sine malunga neekhilomitha ezingama-24.500 kwaye kutshanje uphumelele uhlolo lobuchwephesha. Ifandesi iya kubanjelwa eNew York UDisemba olandelayo. Intengo yentengiso yesithuthi ngomhla wayo yayi $ 128.000 e-US kwaye kulindeleke ukuba ifikelele kwinani lokugqibela phakathi kwe- $ 300.000 kunye ne- $ 400.000.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-BMW kaSteve Jobs iyathengiswa kwifandesi Ngaba unayo imali?
UGoogle ukwazisa usetyenziso lweYouTube TV kungekudala kwiApple TV